တရုတ် APISPEC5L-2012 ကာဗွန်ချောမွေ့စွာသံမဏိလိုင်းပိုက် 46 ထုတ်ဝေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ရွှေ Sanon
စံ: API ကို 5L
grade Group မှ: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 စသည်တို့ကို
အလွိုင်းဒါမှမဟုတ်မ: မလွိုင်း, ကာဗွန်
အထူးပိုက်: PSL2 သို့မဟုတ်အမြင့်တန်းပိုက်
အသုံးပြုမှု: ဆောက်လုပ်ရေး, အရည်ပိုက်
စမ်းသပ်ခြင်း: NDT / CNV
Gr.B X42 X52 X60 X65 X70: API ကို 5L လိုင်းပိုက်သံမဏိအဘို့အ grade
သံမဏိအဆင့် (သံမဏိအမည်) အပူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်အခြေခံပြီး mass အပိုင်းအစများ, Analyzer တစ်ဦး, ဆ%
ကို C MN : P S က V ကို NB ti
max ကိုခ max ကိုခ မိ max ကို max ကို max ကို max ကို max ကို
L175 သို့မဟုတ် A25 0,21 0,60 - 0,030 0,030 - - -
L175P သို့မဟုတ် A25P 0,21 0,60 0,045 0,080 0,030 - - -
L210 သို့မဟုတ်တစ်ဦးက 0,22 0,90 - 0,030 0,030 - - -
L245 သို့မဟုတ် B ကို ၌ 0.28 1,20 - 0,030 0,030 က c,dက c,dဃ
L290 သို့မဟုတ် X42 ၌ 0.28 1,30 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L320 သို့မဟုတ် X46 ၌ 0.28 1,40 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L360 သို့မဟုတ် X52 ၌ 0.28 1,40 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L390 သို့မဟုတ် X56 ၌ 0.28 1,40 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L415 သို့မဟုတ် X60 ၌ 0.28 င 1,40 င - 0,030 0,030 ,f,f, f
L450 သို့မဟုတ် X65 ၌ 0.28 င 1,40 င - 0,030 0,030 ,f,f, f
L485 သို့မဟုတ် X70 ၌ 0.28 င 1,40 င - 0,030 0,030 ,f,f, f
L245 သို့မဟုတ် B ကို ၀.၂၆ 1,20 - 0,030 0,030 က c,dက c,dဃ
L290 သို့မဟုတ် X42 ၀.၂၆ 1,30 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L320 သို့မဟုတ် X46 ၀.၂၆ 1,40 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L360 သို့မဟုတ် X52 ၀.၂၆ 1,40 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L390 သို့မဟုတ် X56 ၀.၂၆ 1,40 - 0,030 0,030 ဃ ဃ ဃ
L415 သို့မဟုတ် X60 0.26 င 1,40 င - 0,030 0,030 ,f,f, f
L450 သို့မဟုတ် X65 0.26 င 1,45 င - 0,030 0,030 ,f,f, f
L485 သို့မဟုတ် X70 0.26 င 1.65 င - 0,030 0,030 ,f,f, f
တစ်ဦး Cu ≤ 0.50%; ni ≤ 0.50%; CR ≤ 0.50% နှင့်မို≤ 0,15% ။
ကာဗွန်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအများဆုံးစူးစိုက်မှု, MN များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအများဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုပြုအထက်တွင် 0.05% တစ်ခုတိုး, အဆင့်≥ L245 သို့မဟုတ် B ကိုများအတွက် 1.65% ဦးရေအများဆုံးမှတက်ပေမယ့်≤ L360 သို့မဟုတ် X52 ကိုအောက်တွင် 0.01% တစ်ခုချင်းစီလျှော့ချရေးအတှကျခ; အဆင့်> L360 သို့မဟုတ် X52 များအတွက် 1.75% ဦးရေအများဆုံးမှတက်ပေမယ့် <L485 သို့မဟုတ် X70; နှင့်အဆင့် L485 သို့မဟုတ် X70 များအတွက် 2,00% ဦးရေအများဆုံးမှတက်။
က c မဟုတ်ရင်သဘောတူညီခဲ့, NB + V ≤ 0.06% မထားရင်။
ဃ NB + V + တီ≤ 0,15% ။
မဟုတ်ရင်သဘောတူညီခဲ့, NB + V + တီ≤ 0,15% မရှိလျှင်f။
ဆခ၏အဘယ်သူမျှမတမင်များအပြင်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျန်နေတဲ့ B က≤ 0,001% ။
ချောမွေ့စွာနှင့်ဂဟေပိုက်၏ပိုက်ခန္ဓာကိုယ် ဂဟေဆော် EW ၏ချုပ်ရိုး, LW, SAW နှင့်နွားမပြွန်
R ကို t0.5
R ကို မီတာ
elongated(on 50 mm or2in.)
တစ်ဦးက , f
မိ မိ မိ မိ
L175 သို့မဟုတ် A25 175 (25.400) ၃၁၀ (၄၅၀၀၀) က c ၃၁၀ (၄၅၀၀၀)
L175P သို့မဟုတ် A25P 175 (25.400) ၃၁၀ (၄၅၀၀၀) က c ၃၁၀ (၄၅၀၀၀)
L210 သို့မဟုတ်တစ်ဦးက 210 (30.500) 335 (48.600) က c 335 (48.600)
L245 သို့မဟုတ် B ကို 245 (35.500) 415 (60.200) က c 415 (60.200)
L290 သို့မဟုတ် X42 290 (42.100) 415 (60.200) က c 415 (60.200)
L320 သို့မဟုတ် X46 320 (46.400) 435 (63.100) က c 435 (63.100)
L360 သို့မဟုတ် X52 360 (52.200) 460 (66.700) က c 460 (66.700)
L390 သို့မဟုတ် X56 390 (56.600) 490 (71.100) က c 490 (71.100)
L415 သို့မဟုတ် X60 415 (60.200) 520 (75.400) က c 520 (75.400)
L450 သို့မဟုတ် X65 450 (65.300) 535 (77.600) က c 535 (77.600)
L485 သို့မဟုတ် X70 485 (70.300) 570 (82.700) က c 570 (82.700)
နိမ့်ဆုံး elongated သတ်မှတ်ထားသောက c, တစ်ဦးက ရာခိုင်နှုန်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အနီးဆုံးရာခိုင်နှုန်းဝိုင်း, f, အောက်ပါညီမျှခြင်းကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခံရကြလိမ့်မည်ကဲ့သို့သော:
ကို C is 1940 for calculations using SI units and 625,000 for calculations using USC units;
တစ်ဦးက အောက်ပါအတိုင်း XC, စတုရန်းမီလီမီတာ (စတုရန်းလက်မ) တွင်ဖော်ပြသက်ဆိုင်သောဆန့စမ်းသပ်အပိုင်းအစ Cross-Section ဧရိယာသည်:
1) မြို့ပတ်ရထား Cross-အပိုင်းစမ်းသပ်အပိုင်းပိုင်းအဘို့, 130 mm2 (0.20 in.2) 12.7 မီလီမီတာ (ထဲမှာ 0.500) နှင့် 8.9 မီလီမီတာအဘို့ (0.350 ၌) အချင်းစမ်းသပ်မှုအပိုငျးပိုငျး။ ။ , 6.4 မီလီမီတာအဘို့ 65 mm2 (0.10 in.2) (0.250 အတွက်။ ) အချင်းကိုစမ်းသပ်အပိုင်းပိုင်း;
စမ်းသပ်မှုအပိုင်းအစ 2) Full-အပိုင်းစမ်းသပ်အပိုင်းပိုင်းတစ်) 485 mm2 (0.75 in.2) နှင့်ခ) ၏အငယျဆုံးသောများအတွက် Cross-Section ဧရိယာသည်ပြင်ပအချင်းများနှင့်ပိုက်များသတ်မှတ်ထားတဲ့နံရံအထူသတ်မှတ်ထားသောသုံးပြီးဆင်းသက်လာ အနီးဆုံး 10 mm2 (0.01 in.2) အားဝိုင်း;
3) ချွတ်စမ်းသပ်အပိုင်းပိုင်းတစ်) 485 mm2 (0.75 in.2) နှင့်ခ) ၏အငယျဆုံးသောစမ်းသပ်မှုအပိုင်းအစ၏ Cross-Section ဧရိယာများအတွက်, စမ်းသပ်မှုအပိုင်းအစနှင့်ပိုက်များသတ်မှတ်ထားတဲ့နံရံအထူ၏သတ်မှတ်ထားတဲ့ width ကို အသုံးပြု. ဆင်းသက်လာ , အနီးဆုံး 10 mm2 (0.01 in.2) အားဝိုင်း;
ဦး is the specified minimum tensile strength, expressed in megapascals (pounds per square inch).
ပြင်ပမှာအချင်း, Round ထဲကနှင့်နံရံအထူ
သတ်မှတ်ထားသောပြင်ပအချင်း D ကို (၌) အချင်းစာနာထောက်ထားရေး, လက်မဃ အတွက် Out-of Round စာနာထောက်ထားရေး
အဆုံးတစ်ဦး မှလွဲ. ပိုက် ပိုက်အဆုံး a, b, c ကို အဆုံးတစ်ဦး မှလွဲ. ပိုက် ပိုက်အဆုံး a, b, c ကို
SMLS ပိုက် ဂဟေဆော်ပိုက် SMLS ပိုက် ဂဟေဆော်ပိုက်
<2,375 + 0.016 မှ -0,031 - 0,031 မှ + 0.016 0,048 0,036
6,625 မှ≥2.375 အဘို့အ 0.020D အဘို့အ 0.015D
+/- 0.0075D - 0,016 မှ + 0.063 : D / t≤75 : D / t≤75
24,000 မှ> 6,625 +/- 0.0075D +/- 0.0075D, ဒါပေမယ့် 0,125 ၏ max ကို +/- 0.005D, ဒါပေမယ့် 0,063 ၏ max ကို 0.020D 0.015D
> 24 56 မှ +/- 0.01D +/- 0.005D ပေမယ် 0,160 ၏ max ကို +/- 0,079 +/- 0,063 0.015D များအတွက်ပေမယ် 0,060 ၏ max ကို 0.01D များအတွက်ပေမယ် 0,500 ၏ max ကို
: D / t≤75 : D / t≤75
> 56 သဘောတူညီခဲ့သည့်အတိုင်း
တစ်ဦး။ အဆိုပါပိုက်အဆုံးပိုက်စှနျးစားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်4၏အရှည်လည်းပါဝင်သည်
ခ။ SMLS ပိုက်များအတွက်သည်းခံစိတ်t≤0.984inလျှောက်ထားခြင်းနှင့်သဘောတူညီခဲ့အဖြစ်ထူပိုက်များအတွက်ခံရလတံ့
က c ။ D≥8.625inနှင့်အတူတိုးချဲ့ပိုက်အဘို့နှင့် Non-တိုးချဲ့ပိုက်အဘို့, အချင်းသည်းခံစိတ်နှင့် Out-of-round သည်းခံစိတ်အချင်းအတွင်း၌တွက်ချက်သို့မဟုတ်အချင်းထက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ OD အတွင်း၌တိုင်းတာသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ပါသည်။
ဃ။ အချင်းသည်းခံစိတ်မှလိုက်နာမှုအဆုံးအဖြတ်အဘို့, ပိုက်အချင်း Pi နေဖြင့်မည်သည့် circumferential လေယာဉ်သွေးခွဲအတွက်ပိုက်၏လုံးပတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
t ကိုလက်မ လက်မ
0,948 <မှ> 0,157 + 0.150t / - 0.125t
≥ 0,984 အဆိုပါ သာ. ကြီးမြတ်သည်ကိုမဆို + 0.146 သို့မဟုတ် + 0.1t,
- 0,120 သို့မဟုတ် - ထို သာ. ကြီးမြတ်သည်ကိုမဆို 0.1t,
welded ပိုက်က c, d
0,591 <မှ> 0,197 +/- 0.1t
တစ်ဦး။ ဝယ်ယူအလို့ငှာဒီ table ထဲမှာပေးသောသက်ဆိုင်သောတန်ဖိုးကိုထက်သေးငယ်သည်မြို့ရိုးအထူတစ်အနုတ်သည်းခံစိတ်သတ်မှတ်ပါတယ်လြှငျ, နံရံအထူများအတွက်ပေါင်းသည်းခံစိတ်သက်ဆိုင်ရာသည်းခံစိတ်အကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုံလောက်သောပမာဏအားဖြင့်တိုးပွါးလိမ့်မည်။
ခ။ D≥ 14,000 နှင့်t≥0.984inနှင့်အတူပိုက်များအတွက်ထရံကိုအထူသည်းခံစိတ်ဒေသအလိုက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်များအတွက်ပေါင်းသည်းခံစိတ်ကိုကျော်လွန်မဟုတ်ကြောင်းပေးအပ်ထားတဲ့အပိုဆောင်း 0.05t အားဖြင့်နံရံအထူများအတွက်ပေါင်းသည်းခံကျော်လွန်စေနိုင်သည်။
က c ။ မြို့ရိုးကို thickened များအတွက်ပေါင်းသည်းခံစိတ်ဂဟေဧရိယာလျှောက်ထားပါဘူး
ဃ။ အပြည့်အဝအသေးစိတျအဘို့အပြည့်အဝ API5L spec ကိုကြည့်ပါ
ဂဟေချုပ်ရိုးဒါမှမဟုတ်ပိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦး hydrostatic စမ်းသပ်ဆီးတားခြင်းငှါပိုက်။ Jointers အသုံးပြုတဲ့ပိုက်ကဏ္ဍများကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်များကို hydrostatic စုံစမ်းစေမလိုပေ။
စမ်းသပ်မှု flattening များအတွက်လက်ခံမှုစံရကြလိမ့်မည်:
EW ပိုက်: D <12,750 အတွက်:
T က 500in နှင့်အတူ X60 ။ အဆိုပါပန်းကန်များအကြားအကွာအဝေးမူရင်းအပြင်ဘက်အချင်း၏ထက်နည်း 66% ဖြစ်ပါသည်ရှေ့တော်၌ထိုဂဟေအဘယ်သူမျှမဖွင့်လှစ်ရှိလိမ့်မည်။ အားလုံးအဆင့်နှင့်မြို့ရိုးအများအတွက်, 50% ။
အဆိုပါပန်းကန်များအကြားအကွာအဝေးမူရင်းအပြင်ဘက်အချင်း၏ထက်နည်း 30% ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာမ: D / t ကို> 10 နှင့်အတူပိုက်များအတွက်ဂဟေအဘယ်သူမျှမဖွင့်လှစ်ရှိလိမ့်မည်။
အခြားအရွယ်အစားများအတွက်အပြည့်အဝ API ကို 5L သတ်မှတ်ချက်ကိုကိုးကားပါ။
PSL2 များအတွက် CVN သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်
အတော်များများက PSL2 ပိုက်အရွယ်အစားနှင့်အဆင့် CVN လိုအပ်သည်။ ချောမွေ့စွာပိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုံစမ်းစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဂဟေဆော်ပိုက်ခန္ဓာကိုယ်, ပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အပူ-ထိခိုက်နစ်နာဇုန်အတွက်စုံစမ်းစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစားနှင့်အဆင့်နှင့်လိုအပ်သောစုပ်ယူတဲ့စွမ်းအင်တန်ဖိုးများဇယားများအတွက်အပြည့်အဝ API ကို 5L သတ်မှတ်ချက်ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။
ယခင်: GB ကို / T5310-2017 Standard တှငျက high-ဖိအားဘွိုင်လာဘို့ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်
နောက်တစ်ခု: GB ကို 3087 စံချောမွေ့စွာဘွိုင်လာအလွိုင်းသံမဏိပိုက်အနိမျ့ဖိအားအလတ်စားဖိအား